March 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo Sabtida ka baxa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa waryasiyo iyo falanqeyno xiiso leh. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 31 03…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 31-03-2019 lite
Baaderiga Vatacanka oo booqasho ku jooga wadanka Marooko.
Magaalada Ar-ribaad ee caasimadda wadanka Marooko, waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo baadariga kaniisadda Vaticanka ninka lagu magacaabo Bob Faransiis. Waxaa garoonka kusoo dhaweeyey boqorka Marooko, Muxamad As-saadis, iyo masuuliyin…
Warka subaxnimo waxaa saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg Warka subaxnimo 31 03 2019.
cusmaan	 Mar 30, 2019 0
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo Sabtida ka baxa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa waryasiyo iyo falanqeyno xiiso leh. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhuuxa…
Rag Basaas ahaa Oo lagu toogtay Fagaare ku yaala Jubbooyinka.
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa xukun xaddu Riddo ah waxay ku riday ugu yaraan 4 ruux oo rag ah, kuwaas oo lagu eedayay iney basaas u ahaayeen sirdoonka dowladda federaalka, ciidamada…
Al-Shabaab oo Ciidamada Dowladda Ku Weeraray Badda Marko Gunteeda.
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kamiin gudaha badda ah u dhigay ciidamo katirsan dowladda oo ku safrayay inta u dhexeysa Muqdisho iyo Marko, iyagoo isticmaalaya doonyo. Mujaahidiinta oo u muuqday kuwa la socday…
Kooxo cunsuriyiin ah ayaa weerar ku qaaday madaraso lagu barto diinta Islaamka oo ku taalla wuqooyiga wadanka Ingiriiska, halkaas oo wax lagu baro ardeyda muslimiinta. Madarasada la weeraray waxay ku taallaa magaalada New castle ee…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 30 03 2019.lite